Ukupeyinta iirobhothi abavelisi - China Ukupeyinta iirobhothi abaxhasi kunye nefektri
IYASKAWA YOKUZOBA IROBOT MOTOMAN-EPX1250
IYASKAWA YOKUZOBA IROBOT MOTOMAN-EPX1250, Irobhothi encinci yokutshiza ine-6-axis nkqo ye-multi-joint, ubunzima obukhulu yi-5Kg, kwaye uluhlu oluphezulu luyi-1256mm. Kufanelekile kwikhabhathi yolawulo ye-NX100 kwaye isetyenziselwa ukutshiza, ukuphatha kunye nokutshiza izinto ezincinci zokusebenza, ezinje ngeefowuni eziphathwayo, izibonakalisi, njl.
I-YASKAWA AUTOMOBIL yokutshiza i-robot MPX1150
Inkqubo ye- imoto yokutshiza i-robot MPX1150 ilungele ukutshiza imisebenzi encinci yokusebenza. Inokuthwala ubunzima obukhulu be-5Kg kunye nobude obuthe tyaba obungama-727mm. Ingasetyenziselwa ukuphatha nokutshiza. Kuxhotyiswe ngekhabhathi yolawulo lwe-minixurized DX200 enikezelwe ukutshiza, exhotyiswe ngumgangatho osemgangathweni wokufundisa kunye nesibhengezo sokuqhushumba esinokufundisa kwiindawo ezinobungozi.
I-Yaskawa yokutshiza i-MOTOMAN-MPX2600
Inkqubo ye- I-Yaskawa yokuFafaza ngeRobhothi Mpx2600 Ngaba Ifakwe Iiplagi naphina, ezinokutshatiswa kunye ezahlukeneyo iimilo Izixhobo. Ingalo inombhobho oMdaka. Ingalo enkulu evulekileyo yoLwelo isetyenziselwa ukuthintela ukuphazamiseka kwepeyinti kunye nombhobho womoya. Irobhothi inokufakwa kumhlaba osezantsi, i-Wall-Mount, okanye iJonge ezantsi ukufezekisa ubeko lweFlexible. Ukulungiswa kwesiNdawo esiHlangeneyo seRobhothi kwandisa uLuhlu oluSebenzayo lweMoto, kwaye into enokuthi ipeyintwe ingafakwa kufutshane neRobhothi.
Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,